आधुनिक डेटिङ अनुप्रयोगहरू मा चीन
चिनियाँ अनुप्रयोग तुलना गर्न छ, बस खडा भन्दा हामीलाई डलर शृंखला एक अनुदान । काम गर्दछ भन्ने नै बाटो मा गर्छ, र यो पनि जस्तै यो देखिन्छ. प्रयोगकर्ता भर्न सक्छन् मा म्यानुअल आफ्नो प्रोफाइल विवरण र चासो छ । वास्तवमा, यस क्षेत्रमा, कुनै चिनियाँ अनुप्रयोग छ अझै व्यवस्थित सङ्कलन गर्न प्रयोगकर्ता रूपमा गतिविधिलाई गर्छ । त्यसपछि, मान्छे स्वाइप गर्न सक्छन् बायाँ वा दायाँ भने तिनीहरूले जस्तै वा जस्तै प्रोफाइल तिनीहरूले देख्न मा आफ्नो स्क्रीन छ । एक पटक सफा गरेको छ, केही अन्य प्रोफाइल गर्नुपर्छ चाँडै देखा । त्यसपछि कुराकानी सुरु भने दुवै को आफ्नो प्रोफाइल र एक तपाईंलाई रुचि मेल खाँदैन ।»धेरै जवान र शहरी मान्छे प्रयोग छ, जो एक धेरै ठूलो प्रयोगकर्ता आधार छ । यसबाहेक, मानिसहरूलाई यो ह्यान्डल गर्न सक्छन् एकदम सजिलै»यस बताए विशेषज्ञ चीन को.
एक पटक फेरि, यस क्षेत्र मा छैन, जो विशेष गरी कारण, दुवै अनुप्रयोगहरू सामेल आफ्नो परिणाम मा कमी को वास्तविकता छ । यसबाहेक, तपाईं प्रकार मा आफ्नो चासो छ, जो कष्टप्रद हुन सक्छ. यी सबै संग छिटो अद्यावधिक मा चिनियाँ, तपाईं अब सुरु सफा छ । हामी इमानदारीसाथ भन्ने आशा तपाईं गर्न सक्षम हुनेछ पाउन । यसरी नै भन्दा (र चकमक), तपाईं गर्न सक्षम संग भेट्न मान्छे । यद्यपि, यसको मुख्य फरक छ, यो छ कि एक मूल प्रयोगकर्ता इन्टरफेस डिजाइन को सट्टा शाब्दिक कपी. प्रयोगकर्ता अझै पनि प्रविष्ट गर्न आवश्यक स्वयं आफ्नो गतिविधिलाई छ, तर अनुप्रयोग (अहिले सम्म) गर्न सक्दैन प्रस्ताव को राशि उपलब्ध विकल्प छ । -कम प्रयोगकर्ता भन्दा. दूरी आधारित फिल्टर उपलब्ध छैन । केही चासो विकल्प उपलब्ध छैन । एक पटक फेरि, त्यहाँ कुनै फिल्टर चयन गर्न उपलब्ध उमेर । यो स्पष्ट देखिन्छ कि र छन् मा एक भीषण प्रतियोगिता । त्यसैले सम्म, नेतृत्व लिएका छ, मुख्यतः किनभने यसको प्रयोगकर्ता आधार छ, जो को मुख्य उद्देश्य लागि अनुप्रयोग रूपमा राम्रो, प्रयोगकर्ता । अर्थ»आमन्त्रण गर्न कसैले शेयर एक भोजन». भन्न मिति वास्तवमा के अधिक अक्सर संग भन्दा अन्य डेटिङ अनुप्रयोग. जो एकदम सजिलो छ बुझ्न? यो अनुप्रयोग तपाईं निम्तो बाँड्न एक खाने मा यसको शीर्षक, त तपाईं चाँडै जाने छ लागि यो छ । यो अनुप्रयोग छ, एक धेरै स्पष्ट आशा छ । शेयर संग एक भोजन कसैले. त्यसैले, यो बनाउँछ बेमतलबको जिस्क्याइले धेरै सजिलो छ । तपाईं आमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ तेजी गर्न कसैले खान । एक बाटो, यो अक्सर जो महिलाहरु निम्तो प्राप्त मानिसहरू द्वारा । त्यसैले सामान्यतया, मान्छे प्रस्ताव खाने मा अनुप्रयोग. त्यसपछि तिनीहरूले चयन गर्न छ जो केटीहरूलाई लागि साइन अप मिति. तरिका, महिलाहरु प्रदान गर्न सक्छन्, खाने पनि गर्न सक्छ, जो असामान्य ध्वनि छ, तर हुनु हुन्छ एकदम राम्रो छ । यो एक ठूलो बाटो निर्माण गर्न नयाँ सम्बन्ध, छैन बस संभावित मिति, किनभने यो ठाउँ चयन गर्न छ एक गास बताउँछ बारेमा धेरै तपाईं र तपाईंको मिति. राम्रो मौका प्राप्त गर्न एक उचित तिथि, मूल, निःशुल्क खाजा र ठूलो प्रयोगकर्ता आधार विपक्ष मा-अनुप्रयोग खरिद, संलग्नता प्राप्त गर्न आवश्यक भोजन । केही मानिसहरू पाउन सक्छ कि तपाईं वास्तव मा छ पूरा गर्न कसैले वास्तविकता मा. मोमो छ धेरै पहिलो डेटिङ अनुप्रयोग कवर सारा बीचमा राज्य । यो देखेको थियो रूपमा, सबै भन्दा राम्रो अनुप्रयोग लागि लूट-कल समयमा एक जबकि. यस खराब प्रतिष्ठा, मोमो परिवर्तन देखि नै एक डेटिङ-केन्द्रित अनुप्रयोग गर्न चासो आधारित सामाजिक सञ्जाल । यो परिवर्तन थियो, धेरै सांस्कृतिक स्वीकार्य छ । हुनुको पहिलो र सबै भन्दा ठूलो डेटिङ अनुप्रयोग, मान्छे अझै पनि यो विचार विशेष अनुप्रयोग गर्न आउँदा यो खोज नयाँ मान्छे । तर, यो अनुप्रयोग छैन एउटा सजिलो एक साथ प्राप्त गर्न, किनभने यसको धेरै थप्न-मा विशेषताहरु । देख मान्छे को लागि नजिकै स्थित छ. तपाईं धेरै राम्रो छ, तर तपाईं पनि खेल्न सक्छन् मिनी खेल सामेल र प्रयोगकर्ता-उत्पन्न समूह । मोमो छ एक रोचक नम्बर को विदेशी प्रयोगकर्ता जो मतलब तपाईं यो अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ.
त । हामीलाई जान मोमो छ । धेरै विशेषताहरु छ
अनुप्रयोग आधारित चासो र दूरी छ । विशाल प्रयोगकर्ता आधार छ । विपक्ष छैन, त्यसैले सजिलो ह्यान्डल गर्न छ । पूर्ण विज्ञापन को छ । मुटुको धड्कन — सुरक्षित लागि अनुप्रयोग जवान विद्यार्थीहरूको छ एउटा अनुप्रयोग लागि बनाएको कलेज विद्यार्थीहरूको छ । सबै प्रयोगकर्ता गर्न प्रस्तुत संस्थागत प्रमाणहरू गर्न सक्षम हुन यो अनुप्रयोग प्रयोग गर्न छ । यो धेरै सख्त फिल्टर सिस्टम देखाउँछ अठोट समावेश गर्न धेरै राम्रो जवान र शिक्षित मान्छे । यसको कार्य गर्न यस्तै छ कफी भेट्छन्: तपाईं प्राप्त दुई मिलानको एक दिन, र यदि मिल्ने हुन्छ स्वीकार, दुवै तपाईं र तपाईंको खेलमा शुरू गर्न सक्छन् एक इश्कबाज.
छैन एक औद्योगिक डेटिङ अनुप्रयोग
तिनीहरूले तिमीलाई दिन दुई मिलानको एक दिन, यो राख्छ, एक ढिलो गति हुन सक्छ जो एक असल वा खराब बिन्दु मा निर्भर गर्दछ, प्रयोगकर्ता’ राय छ । युवा, शिक्षित र प्रमाणीकरण गरिएको प्रयोगकर्ता, सुरक्षित, राम्रो देख इन्टरफेस छ । विपक्ष शायद पनि जवान जनसंख्या मिलानको एक दिन, शायद छैन पर्याप्त गम्भीर छ । सख्त आवेदन प्रक्रिया छ । कृपया याद गर्नुहोस् यो नाम लगभग अनुवाद मा एक स्वीकार्य अंग्रेजी अर्थ । तिनीहरूले खडा छैन रूपमा आधिकारिक नाम छ । ठूलो लेख । आहत भने, म तपाईं सुझाव सिक्न विभाजित. कहिल्यै विभाजित वास्तवमा छैन एक उचित व्याकरण नियम अंग्रेजी मा (यो बन्द आधारित विक्टोरियन). यो वाक्यांश, इनपुट स्वयं आफ्नो प्राथमिकतामा (र केही अरूलाई), ध्वनि बिल्कुल भयानक छ । म्यानुअल आगत पूर्णतया राम्रो र प्राकृतिक
← कसरी पूरा र मिति चिनियाँ बालिका - एशिया डेटिङ विशेषज्ञहरु
© 2019 भिडियो च्याट चीन